နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း MINISEE DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
HWMonitor အစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာ၏ Hardware ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲတစ်ဦးကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောင်ကသုံးနိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်အပြေး, အဲဒါကိုမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးကြောင်းထင်ရပေမည်။ တောင်မှရုရှား interface ကိုမရရှိနိုင်။ အဖြစ်မှန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့ပြုမှမည်သို့ဥပမာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ, ငါ့ netbook Acer မှစုံစမ်းမည်။
pre-ဆွဲယူတဲ့ file ကို run လိုက်ပါ။ (သင်အရာရှိတစ်ဦးအရင်းအမြစ်မှဒေါင်းလုတ်လုပ်မဟုတ်လျှင်) အလိုအလျှောက်အပေါငျးတို့သပစ္စည်းများ, မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်, ဆော့ဝဲနှင့်အတူမတပ်ဆင်ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူသဘောတူနိုင်သလား။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး 10 စက္ကန့်ကြာပါတယ်။
အဆိုပါရောဂါရှာဖွေရေးစတင်နိုင်ရန် ပို. ဘာမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါပစ်လွှတ်ပြီးနောက်, အစီအစဉ်ကိုပြီးသားအားလုံးလိုအပ်သော parameters တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ငါ့အ hard drive ကိုယူပါ။ သူကပထမဦးဆုံးစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကော်လံအတွက်ပျမ်းမျှအပူချိန်ဖြစ်ပါသည် 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ ဤစက်ကိရိယာများ၏ပုံမှန် parameters တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ် 35-40။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းထက်မပိုပါဘူးဆိုရင် 52 ဒီဂရီဒါဟာအစအထူးသဖြင့်အပူထဲမှာပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ကအအေး device ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ၏ပိုလျှံအတွက်အပူချိန် 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သူဟာကိရိယာအရေးယူဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နှင့်အတူပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကပြောပါတယ်။
2. ပုဒ်မ « Utilizatoins » အဆိုပါ hard disk ကိုဝန်၏အတိုင်းအတာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းပိုကောင်းအောက်ပိုင်း။ ငါကအကြောင်း 40%ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။
လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ 3. ဗီဒီယိုဗို့အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုပါ။ ပုံမှန်နှုန်းကို 1000-1250 V ကို။ ကြှနျတေျာ့ 0,825V။ အဆိုပါညွှန်ကိန်းအရေးပါသည်မဟုတ်, စဉ်းစားရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
4. ထို့နောက်ဗီဒီယိုကဒ်အပိုင်း၏အပူချိန်ကိုနှိုငျးယှဉျ «အပူချိန်»။ ပုံမှန်အကွာအဝေးခုနှစ်တွင်ညွှန်းကိန်းများမှာ 50-65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ ငါကအထက်နေရာကပေါ်ပြေးရှိသည်။
အပိုင်း၏ကြိမ်နှုန်းပတ်သတ်ပြီးအတူ 5. « clock »ထိုအခါကဒါခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ပေးအပေါင်းတို့, ကွဲပြားခြားနားသည်။ ပုံမှန်တန်ဖိုးကိုကျွန်မရဲ့မြေပုံအရ 400 MHz.
6. ပိတ်ဆို့မှုကိုအချို့ applications များမရှိဘဲအထူးသဖြင့်ညွှန်ပြမဟုတ်ပါဘူး။ ဂိမ်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ်အစီအစဉ်များကိုအပြေးလာသောအခါဒီတန်ဖိုးကို သာ. ကောင်း၏စမ်းသပ်ရန်။
7. ကျွန်တော်တစ်ဦး netbook, ငါ၏ပစ္စုပ္ပန်ဘက်ထရီ၏ parameters တွေကို (ဒီ field ရဲ့ကွန်ပျူတာများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ) အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်ကတည်းက။ ပျမ်းမျှဘက်ထရီဗို့တန်ဖိုးကိုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် 14.8 V ကို။ ကျွန်မအကြောင်းကိုရှိ 12 ထိုသို့မကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
8. အောက်ပါပါဝါအပိုင်းဖြစ်ပါသည် «စွမ်းရည်»။ ဤနေရာတွင် prerevodit လျှင်, ပထမဦးဆုံးလိုင်းဖြစ်ပါသည် "ဒီဒီဇိုင်းကိုစွမ်းရည်မြှင့်"ဒုတိယခုနှစ်တွင် "အပြည့်အဝ", ပြီးတော့ "လက်ရှိ"။ အဆိုပါတန်ဖိုးများကိုဘက်ထရီပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။
9. ပုဒ်မ « Levels » ဘက်ထရီ box ရဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးလာ၏အဆင့်ကိုကြည့်ရှု « Wear အဆင့်»။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းပိုကောင်းနိမ့်သည်။ «တာဝန်ခံအဆင့်» ဒါဟာတာဝန်ခံအဆင့်ကိုပြသသည်။ ငါသည်ဤညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူအတော်လေးကောင်းလှ၏ရှိသည်။
11. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CPU ကိုအသုံးချခန့်မှန်းချက်အပိုင်း «အသုံးချ»။ ဤရွေ့ကားကိန်းဂဏန်းများအဆက်မပြတ်ပြေးဖြစ်စဉ်များအပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ သင်မြင်ရင်တောင် 100% download, အကဖြစ်ပျက်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ သင်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို Processor ကိုဒိုင်းနမစ်စေနိုင်သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ရလဒ်များသင်တို့ကိုကယ်တင်ချင်တယ်။ ယခင်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဥပမာ။ သင်ကမီနူး၌ဤလုပျနိုငျ «ဖိုင်မှတ်တမ်း-Save ဖို့ဒေတာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း».
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောဂါကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်မဆိုးရလဒ်, ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုကဒ်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ စကားမစပ်, ကွန်ပျူတာနေဆဲသည်အခြားအညွှန်းကိန်းရှိနိုင်ပါသည်, ကလူအပေါင်းတို့သည် installed ပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Além de Alice - SO1E5 - Arrependimentos & Impressões. Websérie LGBT (စက်တင်ဘာလ 2019).